सिल्लल्ट विशेषज्ञ: कसरी Trojan Botnet बाट छुटकारा प्राप्त गर्न
Carlos Iglesias Vicente
ट्रोजन बोटनेट स्प्रेड गर्दा तपाईंको सुरक्षा उपाय प्रामाणिक र विश्वसनीय छैन। जो धेरै प्रेमी छन् प्रयोगकर्ताहरू अज्ञात प्रेषकहरूबाट अनुलग्नकहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले निर्दोष हुन र तपाइँलाई केही अनलाइन लेनदेनहरूमा संलग्न हुन चाहानुहुन्छ। यसका लागि, उनीहरूलाई तपाइँले विशेष लिङ्कमा क्लिक गर्न सोध्नुहुन्छ, जुन सुरक्षित छैनन्। ट्रोजन संक्रमणहरु प्रायः यी संदिग्ध संलग्नक वा लिङ्कहरू मार्फत फैलिएको छ। तिनीहरू तपाईंको बृहत प्रणालीमा स्थापना गर्ने बटुवा एजेन्ट हुन्छन् र यसलाई लाश जस्तो देखिन्छ। जैक मिलर, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि ट्रोजन botnet को अधिकांश मामलाहरु लाई रिपोर्ट गरिन्छ जब कुनै सिस्टम को rootkit या Trojan घोडा संग प्रभावित हो या जब दुर्भावनापूर्ण कोड कम्प्यूटर सिस्टम मा प्रवेश गरिन्छ र बन जाते हो यसको मेमोरीको एक अंश।
यी संक्रमण कसरी फैलन्छ?
अन्य प्रोग्रामहरू जस्तै, ट्रोजन बोटनेटहरूले अनियमित रूपमा फैलिएको र ठूलो संख्यामा कम्प्युटर यन्त्रहरू सम्झौता गर्छन्। यी कार्यक्रमहरू तपाईंको कम्प्युटर उपकरणको भाग बन्नु र तपाईंलाई थाहा छैन कि तिनीहरू सक्रिय रूपमा केही अवैध कार्यहरू प्रदर्शन गर्दैछन्। सबै भन्दा बढी भागहरु को लागि, Trojan botnets र संक्रमणहरु आफ्नो डिवाइस मा कन्फिगरेसन प्रविष्टिहरु बनाएँ र यसको समग्र प्रदर्शन र कार्यक्षमता समझौता।
कैसे आफ्नो सिस्टम देखि Trojan botnets हटाउन को लागि?
दुर्भाग्यवश, ट्रोजन botnets र अन्य बटहरूको आगमन रोक्न कुनै तरिका छैन, तर तपाईं तिनीहरूलाई पाँचवटा तरिकामा आफ्नो कम्प्युटरबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
प्रक्रिया 1 № 1: Autoruns को उपयोग
सौभाग्य, केही प्रोग्रामहरू र उपकरणहरू तपाइँले ट्रोजन बोटनेटहरूलाई ठूलो मात्रामा काट्न अनुमति दिन्छ। हामी तपाईंलाई सिसेन्सनेट वा अटोरेन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं। दुवै धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू छन् र स्थापना गर्न सजिलो हुन्छ। उनीहरु स्थापित भएमा, तपाईंले तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडै सक्रिय गर्न बिर्सनु हुँदैन। यो कार्यक्रम सबै ट्रोजन बोटनीटहरू र परम्परागत बुटहरू सूचीबद्ध गर्नेछ, जुन तपाईले तपाइँको प्रणालीबाट हटाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
प्रक्रिया2№2: क्यास खाली गर्नुहोस्
तपाईंले यो कार्यक्रम स्थापना गरेपछि, तपाईंको क्यास खाली गर्न नबिर्सनुहोस्। म यहाँ भन्छु कि ट्रोजन बोटनेट्सले तपाईको टुक्रालाई छोड्नु भए पनि तपाईले हटाउनुभए पछि। त्यसैले क्यास हटाउँदै यो सुनिश्चित हुनेछन् कि तिनीहरूका सबै टुक्राहरू हटाइएका छन्, र तपाइँलाई अन्य सुरक्षा उपायहरू चलाउन आवश्यक छैन।
प्रक्रिया3№: एंटीवायरस र एंटी ट्रोजन प्रोग्रामहरू स्थापित गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई अपडेट गर्नुहोस्
तपाई एंटिभिरस र एंटी ट्रोजन प्रोग्रामहरू स्थापना गर्न बिर्सनु हुँदैन र तिनीहरूलाई हरेक दिन अद्यावधिक राख्नु हुँदैन। यी प्रोग्रामहरू तपाइँले सबै ट्रोजन बोटनेटहरू हटाउन मद्दत पुर्याउनुहुनेछ, र DoS आक्रमणहरू ठूलो हद सम्म रोकिन सक्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो सुरक्षा प्याच अद्यावधिक गरिसक्नु भएको छ र अतिरिक्त सुविधाहरू र विशेषताहरूको लागि उनीहरूको सशुल्क संस्करणहरू खरीद गर्न हिचकिचाउँदैन।
सिफारिस गरिएको एंटीवायरस कार्यक्रमहरू र विरोधी मालवेयर उपकरणहरू